Umkhiqizo isicelo ensimini - Huizhou Jinhaocheng Co., Ltd
Sihlose ukuba abe ibhizinisi lesimanje ekahle kwezentengiselwano "Ubuqotho kanye nokuzethemba" futhi ngenhloso "Ukunikela amakhasimende amasevisi abaqotho kakhulu futhi arcade imikhiqizo". Thina ngobuqotho sicele ukwesekwa zakho zingaguquliwe futhi sazise ngeseluleko sakho somusa nesiqondiso.
Sithanda kakhulu ukuthola ithuba ukwenza ibhizinisi nawe, uyabuthanda axube eminye imininingwane imikhiqizo yethu. eliphezulu, ngamanani yokuncintisana, ukulethwa sisigcine futhi inkonzo elinokwethenjelwa kungenziwa okuqinisekisiwe.
Imikhiqizo yethu zihlukaniswe: Needle Uhlobo oluphantshiwe Series, Spunlace Series, sasondelana Thermal (emoyeni Zezıhlabane ngokusebenzisa) yomkhiqizo, Zezıhlabane Rolling yomkhiqizo, Quilting imikhiqizo main yomkhiqizo futhi yokuvikela ngocwazi Series.Our yilezi: umbala Amatebhe wazizwa, printe dnon-nokwelukiweyo, yezimoto Indwangu ingaphakathi, landscape ubunjiniyela geotextile, base ukhaphethi indwangu, ingubo kagesi okungezona nokwelukiweyo, inhlanzeko usula, ukotini kanzima, Ukuvikelwa ifenisha mat, kumatilasi pad, ifenisha ukupheda nemikhiqizo others.These okungezona nokwelukiweyo kabanzi futhi ngesinyenyela emikhakheni ehlukahlukene emphakathini wanamuhla, ezifana njengoba: nokuvikelwa kwemvelo, imoto, izicathulo, ifenisha, omatilasi, izingubo, izikhwama, amathoyizi, ukuhlunga, ukunakekelwa kwezempilo, izipho, izimpahla kagesi, imishini elalelwayo, ukwakhiwa ubunjiniyela kanye nezinye izimboni. Owenza izici imikhiqizo, thina nje kuphela zakuleli kodwa futhi zithunyelwa eJapane, e-Australia, eNingizimu-mpumalanga Asia, e-Europe nakwezinye izindawo kanye ujabulela idumela eliphezulu kusuka amaklayenti emhlabeni wonke.